Bitcoin Hardforks inona moa izany? - Blockchain News
Inona no atao hoe ny fikororohana?
Ny tambajotra Bitcoin lasa alalan'ny maro fitrebika hatramin'ny fahatongavan'ny cryptocurrency ity amin'ny 2008. Ireo fitrebika dia tokony hanampy ny mpandraharaha mba hamaha ny olana toy ny scalability, ambany fahafahana ny TPS (raharaham-barotra isan-tsegondra), andian-tsoratra voafetra habe, ary amin'ny ankapobeny mba hanamorana ny tambajotra Bitcoin be loatra. Amin'ny maha bitcoin ny rindrambaiko malalaka, misy mpampiasa ny tambajotra dia afaka maka tahaka, manova, ary mampahafantatra ny fitsipika ao amin'ny fehezan-dalàna. Noho izany, Mety misy mpampiasa mamorona protocols vaovao sy ny rojo, izay heverina ho fitrebika, izany hoe malefaka na hardforks ny tambajotra.
Softfork dia azo ahitsy fiovana teo amin'ny blockchain protocole izay tsy misakana ny nodes ny vaovao avy amin'ny fifandraisana rojo ny nodes ny rojo taloha. Ny tsara indrindra dia Segregated ohatra softfork Vavolombelona na SegWit. Network mpampiasa no mampandeha izany softfork tamin'ny volana Aogositra mba manatsara ny firafitry ny andian-tsoratra varotra izy ireo mba tsy hibodo toerana fitadidiana. Ny softfork Navela ho an'ny vato hanao fanazavana fanampiny tsy manova ny asan'ny tambajotra Bitcoin.
Hardfork dia tambajotra vaovao rojo rehetra izay voaforona rehefa fitsipika vaovao ho tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana blockchain taloha. Raha izany dia, ny nodes ny tambajotra-baovao sy ela dia tsy ho afaka ny “mampita,” satria midika hardfork ny fanovana ny fifanarahana rafitra mihitsy. Miaraka amin'ny fanampian'ny hardforks, mpampiasa tambajotra miezaka mamaha olana manan-danja ao amin'ny Bitcoin tambajotra toy ny tambajotra ambany passante izay mamela ny fandraisana hatramin'ny fito varotra isan-tsegondra sy voafetra ny habeny andian-tsoratra izay, araka ny maro, dia tokony hanao mihoatra noho 1 MB ny tahirin-kevitra. Hardforks ihany koa ny mamela ireo mpampiasa mba hamorona cryptocurrencies vaovao, toy ny safidy mba bitcoin.
Past hardforks valiny
Bitcoin XT no voalohany tambajotra Bitcoin hardfork, izay natao tamin'ny Aogositra ny 2015. The hardfork, izay mifototra amin'ny mari-tomboky ny Bitcoin Core, Tokony hampitombo ny andian-tsoratra ny habe 8 MB, mitombo amin 'izany ny tambajotra passante niakatra ho any 24 varotra isan-tsegondra, nefa cryptocurrency tsy hahazo ny fanampiana ilaina avy amin'ny harena ankibon'ny tany fiaraha-monina. Hampiharana Bitcoin XT dia takiana 75% rehetra Bitcoin tambajotra mpitrandraka hiditra ny tambajotra vaovao, afa-tsy 12% tamin'izy ireo nanohana ny hardfork. Noho izany, iray amin'ireo mpandraharaha lehibe Mike Hearn nivarotra ny cryptocurrencies ka nandao ny tetikasa ao amin'ny 2016. Vokatr'izany, ihany 20 nodes sisa avy tany am-boalohany 4,000 vondrona, izay nanao ny tambajotra Tsy vonona tamin'izany fotoana.
Bitcoin Unlimited hardfork natomboka mba hanova ny andian-tsoratra haben'ny tamin'ny Mey 2016, ireo mpitrandraka rehefa nanolo-kevitra ny hisafidy ny haben'ny ny ho avy tambajotra andian-tsoratra. Araka ny mpitrandraka, fanitarana ny haben'ny ny andian-tsoratra dia tsy hanafoana ny filaharana fotsiny fa koa hanatsara ny profitability amin'ny fampitomboana ny asa tanteraka ao amin'ny andian-tsoratra saram. Fa hardforks tsikera, ny ankamaroan'izy ireo mpandraharaha, nanamarika fa tetika io afaka mampitombo ny mety fa foibe lehibe dobo ny mpitrandraka dia hanomboka fitaovana fampandrosoana ny tambajotra.
Nidika izany fa fitaovana mpitrandraka miaraka amin'ny fahaiza-manao voafetra dia tsy ho afaka handray anjara amin'ny fomba mahomby eo amin'ny fampandrosoana ny harato sy izany any aoriana any dia ho tanteraka voasolon'ny fivavahana. Noho izany, ny tambajotra ho lasa foibe amin'ny dobo maro. Manam-pahaizana koa ny bibikely maro hita ao amin'ny Bitcoin Unlimited rindrambaiko, izay voalohany tamin'ny volana Aprily, ary avy eo tamin'ny May tamin'ity taona ity nitarika ny nianjeran'i 70% ny nodes ao amin'ny tambajotra, fiaraha-monina amin 'izany hampihena crypto matoky ireo fitrebika.
Bitcoin Classic tetikasa natomboka mba hiatrehana ny olana scalability Network Bitcoin, izay tsy mbola voavaha ny Bitcoin XT hardfork. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny hampitombo ny andian-tsoratra ny habe 2 MB ary avy eo dia 4 MB. Hardfork anefa izany dia tsy hahazo ny ilaina ho fanohanana ny fiaraha-monina crypto. Ilay tandapa nahatsapa fa manomboka mihoatra noho ny 2,000 nodes nandray anjara tamin'ny tetikasa,” fa ny isa nilatsaka ho 100 ny 2017. Tamin'ny volana Novambra no nanambarana ny tetikasa fanakatonana rehefa SegWit2X no nofoanana sy mpandraharaha ny tetikasa efa ampahibemaso nanohana Bitcoin Cash, cryptocurrency vaovao.
Bitcoin Cash angamba no malaza indrindra sy mahomby Bitcoin Network hardfork. Noho ny fanerena hardfork fifanarahana, Bitcoin Cash niseho teo amin'ny andian-tsoratra 478,558 amin'ny 1 Aogositra. Izay tafiditra ao ny fikororohana, Nitombo ny andian-tsoratra avy amin'ny habe 1 MB ho 8 MB, ary izany, mifandimby, nampitombo ny tambajotra sy ny fahaiza-barotra nampihena saram. Rehefa avy hardfork, Bitcoin nanana mitovy mpihazona ny habetsahan'ny Bitcoin Cash ao amin'ny e-mpanjifany. Ny tambajotra vaovao dia nanome ny zotran izay miaro amin'ny concurrent varotra roa blockchains. ankehitriny, 13 Desambra, ny Bitcoin Cash tahan'ny fifanakalozana dia $1,616.84 ary amin'izao fotoana izao nametraka ny cryptomarket fahatelo capitalization.
Bitcoin Gold cryptocurrency niseho tamin'ny 24 Oktobra vokatry ny hardfork eo amin'ny andian-tsoratra 491,407 harena ankibon'ny tany ataon'ny helatra mafy ASIC in Hong Kong. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny ho lasa tsara tarehy kokoa noho ny vola tsy matihanina mpitrandraka noho ny tany am-boalohany bitcoin. Noho izany, bebe kokoa ireo mpampiasa tambajotra maro aho ho afaka Bitcoin volamena sy ny teny filamatra no cryptocurrency “manao bitcoin décentralisées indray.” Raha tokony ho ny taloha Porofo-of-Work protocole hardfork initiators mampiasa ny iray vaovao, Equihash. Ity algorithm mora mahatsapa kokoa ny haben'ny kisendrasendra fidirana fitadidiana (ram) ary dia ampiasaina koa, rehefa ny harena ankibon'ny tany cryptocurrency Zcash. ankehitriny, 13 Desambra, Bitcoin Gold tahan'ny fifanakalozana dia $276.88 sy ny tsena capitalization dia mihoatra noho ny $4.5 lavitrisa.
Bitcoin Diamond no hardfork, izay nitranga tamin'ny faran'ny Novambra ny andian-tsoratra 495,866. Bitcoin Diamond mpitrandraka vato mamorona vaovao amin'ny algorithm ny porofon'ny asa (PoW). koa, cryptocurrency ity mitovy amin'ny voalohany indrindra ny anankiray tamin'ny im-polo boky mitombo ny entona sy ny andian-tsoratra haben'ny 8 MB. Developers mino fa hardfork io dia natao hamahana izany olana toy ny tsy fahampian'ny fiarovana ny fiainana manokana, miadana raharaham-barotra ny fandraisana ho mpikambana, ary ny tokonam-baravarana avo ho an'ny mpandray anjara vaovao hiditra ny tambajotra. Mba hamorona Bitcoin Diamond harena ankibon'ny tany Network, e-kitapom-batsy, nodes fehezan-dalàna, ary ny API, ary koa ny manampy misokatra mari-tomboky ny GitHub dia nanomana tamin'ny faran'ny taona.
Super Bitcoin, vaovao cryptocurrency, niseho tamin'ny 12 Desambra, toy ny vokatry ny fizarana ao amin'ny Bitcoin tambajotra eo amin'ny andian-tsoratra 498,888. Ny teny filamatra dia Super Bitcoin “Bitcoin ho lehibe indray.” Tsara homarihina fa raha tokony ho ny nentim-paharazana ICO sehatra ity dia mampiasa fomba vaovao ny hisarihana fampiasam-bola, antsoina hoe voalohany Fork Fanatitra (IFO). Ny hardfork manome ny tarika hitombo ho amin'ny 8 MB. Ny tambajotra dia mampiasa ny teknolojia helatra Network izay nitarika ny tsy manam-petra hamela isan'ny micropayments. Ary, Super Bitcoin tambajotra dia mihazakazaka marani-tsaina fifanarahana. Developers naoty, na izany aza, fa ny fikororohana dia natao mba hahatakatra ny crypto faniriana sy vondrom-piarahamonina izany fa fanandramana.
Helatra Bitcoin - ny tambajotra dia heverina hitranga fizarana faha-23 Desambra teo amin'ny andian-tsoratra 499,999. Ny mpandraharaha ao amin'ny tambajotra vaovao te-hanambatra ny tsara indrindra sy ny toetra ny bitcoin ethereum. Noho izany, Network ny helatra ny teknolojia ampiasaina ihany koa ao amin'ny tambajotra vaovao ho an'ny fanatanterahana micropayments sy ny ranom-DPOS (Porofo ny ampandraiketiny Tsatòkan ') rafitra ho ampiharina ny fifanarahana. Mba hampitomboana ny vondrona ho amin'ny 2 MB, izay hampitombo ny hafainganam-pandeha sy ny raharaham-barotra dia antenaina fa hanampy ny tambajotra marani-tsaina fifanarahana. Ny tambajotra ihany koa ny manana hafainganam-pandehan'ny mitombo andian-tsoratra vaovao zavaboary izay mitondra ho any 3 segondra. Na tsy manohana hardfork SegWit, dia manome fiarovana avy miverimberina varotra. Na izany aza, Tsara homarihina fa na dia eo aza ny manatona fandefasana daty, dia manana ny tetikasa mbola mba hanorina miasa tranonkala.
Bitcoin Good hardfork, kevitra ny Shinoa mpampiasa vola cryptocurrency Chandler Guo, dia ny hitranga eo amin'ny andian-tsoratra 501,225, amin'ny 25 Desambra. Ny mpandraharaha dia nilaza fa mialoha ny fitrandrahana tsy hitranga, raha ny émission boky dia hahatratra 21 tapitrisa AN'ANDRIAMANITRA. Fifanakalozana tahiry maro no efa nanamafy fa izy ireo no miasa amin'ny cryptocurrency vaovao, izay ho talentany mba bitcoin mpihazona amin'ny isaky ny iray ny iray.
Bitcoin Platinum dia naseho ho toy ny tambajotra Bitcoin hardfork, izay tokony hitranga eo amin'ny andian-tsoratra 498,577 ary mamorona vaovao cryptocurrency. Na izany aza, araka ny tatitra Cointelegraph, ny hardfork dia scam noforonin'ny tanora avy any Korea Atsimo, ary ny vola dia feno mihitsy dika mitovy ny Bitcoin Cash fehezan-dalàna.
Mpiara-manorina ny ZenCash, Rob Viglione dia mino fa ny fitrebika no sahaza ny blockchain dingana fampandrosoana:
Open-source firaisan'ny tontolo iainana dia natao mba nivoatra, na izany amin'ny alalan'ny in-tetikasa fanatsarana na fitrebika izay ny fehezan-dalàna iray manontolo fototra mandeha amin'ny lalana tsy mifanaraka. Evolisiona dia mahafantatra ny korontana dingana, ka tsy miala avy tsara foana, saingy indraindray izany no hany làlan-tokana no lehibe breakthroughs.
Ny nitarika developer ny blockchain in Sweetbridge, Bob Ranohira dia mino fa tsara ny fitrebika, satria mamela ny mpikambana manapa-kevitra ny fomba tokony hampivelatra ny tambajotra:
Nisy ireo taona maro ny tahotra, tsy fahazoana antoka, ary misalasala ao anatin'ny vondrom-piarahamonina ny Bitcoin momba ny mety sarotra fitrebika. Tsy hita ny ahy fa ny ankamaroan'ny izany tabataba dia avy amin'ny vondrona izay mankasitraka fanerena sy ny sivana maimaim-poana ny tsena sy ny zo secede.
Tsy misy zavatra toy izany ho toy ny "ratsy fikororohana. 'Tsy manana hampifaly ekipa iray na ny hafa. Fanandramana sy ny fifaninanana tsara. Aoka ny tsena manapa-kevitra ary mandray anjara izay mahita zava-dehibe.
Ny fianarana sarobidy indrindra avy amin'ny traikefa Ita / sns mivaky dia hoe vitsy an'isa gadra no azo iainana. Raha misy fiaraha-monina crypto manana irreconcilable fahasamihafana, dia afaka mandeha misaraka ny fomba, ary izany dia tsara fotsiny. Ianao hahazo fisaraham-panambadiana ary samy handroso amin'ny ny fiainanareo, fa tsy miara-mipetraka amin'ny fahoriana mandrakizay, mifamaly mandrakariva. "
Fa Talen'ny LOOMIA, Saul Lederer mifanohitra tanteraka manana fomba fijery:
"Mamonto ny tsena amin'ny dikan-samy hafa ny Bitcoin no mampisafotofoto ny mpampiasa sy manamaivan-milaza fa misy vitsivitsy BitCoins-satria afaka foana fikororohana ka avo roa heny ny fanomezana,"Nanamarika Lederer. "Inona no tena manahirana dia ny hoe ireo kofehy ireny-offs niseho avy somary bitika fa miady lava ny ao amin'ny fiaraha-monina Bitcoin ny fomba hiatrehana ny andian-tsoratra habe fetra. Raha tokony ho avy amin'ny fifanarahana, ny fiaraha-monina, mpandraharaha, sy ny kaody dia fracturing ho vondrona isan-karazany. "
Mario Draghi: Bitcoin lalàna dia tsy andraikitry ECB
Ny expansi ...
Ahoana no iray mialoha ny fitondran-tena ny tahan'ny ny cryptocurrency eo amin'ny lafiny ny isan'ny didy, p ...
Inona no natiora O ...
Previous Post:Blockchain News 11 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 12 Janoary 2018